संसारका सुन्दर जासुस महिलाहरु : जसकारण लाखौं मान्छे मरे र लाखौं मान्छे मर्नबाट बँचे-Nepali online news portal
संसारका सुन्दर जासुस महिलाहरु : जसकारण लाखौं मान्छे मरे र लाखौं मान्छे मर्नबाट बँचे
जासुसहरु अपत्यारिलो हुन्छन् । उनीहरु भेष बदल्ने मात्र नभई आश्चर्यजनक तरिकाले काम गर्छन् । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि भित्रि कुरा बाहिर निकाल्न समक्ष हुन्छन् ।
जासुसीका बारेमा संसारमा धेरै फिल्महरु पनि बनेका छन् । संसारमा त्यस्ता खतरनाक महिला जासुसहरु पनि रहेका थिए र आजपनि छन, जसको बारेमा कमैलाई मात्र थाहा छ ।
मार्गेथा गीरत्रुइदा म्याकलियोड
मार्गेथा गीरत्रुइदा म्याकलियोडलाई मानिसहरु ‘माता हारी’को नाममा चिन्छन् । माता हारी एक कामुक नृत्यांगना थिइन् । जसको प्रथम विश्वयुद्धमा जासूसी गरेको आरोपमा गोली हानी हत्या भयो । सन् १९३१ मा माता हारीको जीवन कहानीमा आधारित हलिउड फिल्म बन्यो । जसमा ग्रेटा गर्बो मुख्य भूमिकामा थिइन् ।
मार्गेथाको जन्मको होल्याण्डमा भएको थियो र विवाह एक फौजी क्याप्टेनसँग भयो । तर, एक खराब सम्बन्धका कारण मार्गेथाले आफ्नो बच्चा समेत गुमाएकी थिइन् ।
सन् १९०५ मा मार्गेथाले आफैंलाई ‘माता हारी’को पहिचान दिइन् । र, इटलीको मिलानस्थित ला स्काला र पेरिसको ओपेरामा एक कामुक नृत्यांगना बनेर स्थापित भएकी थिइन् ।
चर्चा कमाएसकेकी मार्गेथा आफ्नो पेसाका कारण जीवन जिउन गाह्रो भएन ।यसकारण जर्मनीले प्रथम विश्वयुद्धको क्रममा माता हारी जर्मनीको जासूस बनिन् ।
माता हारीले कसैले मारिनन् तर उनको जासूसीको कारण लगभग ५० हजार फ्रान्सेली सैनिकको मृत्यु भयो ।
त्यसपछि फ्रान्सलाई उनीमाथि शंका लाग्न थाल्यो । सन् १९१७ फेब्रुअरीमा उनलाई पेरिसबाट गिरफ्तारी गरियो र अक्टोबरमा उनलाई गोली हानी मारियो । उनको मृत्युको सय वर्षपछि अपराधबारे बहस सुरु हुन थालेको छ ।
शार्लेटको पूरा नाम म्यारी एन शार्लेट डी कोर्डी थियो । उनी फ्रान्सको क्रान्तिको हिस्सा बनिन् । फ्रान्सको क्रान्तिमा हिंसा नचाहने शार्लेटले आफ्नो विपक्षी ज्याकोबिन समूहका नेता जीन पोल म्याराटको हत्या गरिदिइन् ।
सन् १७९३ जुलाईमा शार्लेटले म्याराटलाई चक्कु प्रहार गरिन् जब उनी बाथटबमा नुहाइरहेका थिए । हत्याको आरोपमा उनलाई पक्राउ गर्दा शार्लेटले देशकै निम्ती आफूले त्यस कदम चालेको बताएकी थिइन् ।
उनले दावी गरिन् कि उक्त एक हत्याले हजारौं मानिसहरुको ज्यान बच्यो । तर, त्यसको चार दिनपछि उनले सजाय पाइन् ।
जासूस आफ्नो उपनाम राख्न मन पराउँछन् । यस तथ्यलाई यथार्थमा बदल्दै शी ले जासूसी संसारमा शी जिआनकिआओ राखिन् ।
जिआनकिआओ आफ्नो पिताको हत्याको बदला लिनकै लागि जासूसी बनिन् । उनको हत्या चीनका नेता सुन चुआंगफांगले सन् १९२५ मा गरेका थिए ।
१० वर्षपछि जिआनकिआओले चुआंगफांगको शिरमा गोली हानिन् जब उनी एक बौद्ध मन्दिरमा पूजा गरिरहेका थिए । यस हत्या गरेपछि भाग्नुको सट्टा उनी घटनास्थलमा रोकिएर आफ्नो अपराध स्वीकारिन् ।सन् १९७९ मा उनको निधन भयो ।
एक समय जर्मनीको सबैभन्दा शक्तिशाली महिला मानिएकी ब्रिगित मोअनहोप्ट रेड आर्मी फंशनकी सदस्य थिइन् । ब्रिगित सन् १९७७ मा जर्मनीको एक आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भइन् ।
७० को दशकमा पश्चिम जर्मनीको एक वाम चरमपन्थी समूहद्वारा एकपछि अर्को हाइज्याक, हत्या र बम धमाका भए । विमान हाइज्याकसँगै लगभग ३० जनाको हत्या उक्त समूहले र्गयो । यस अपराध पश्चिम जर्मनीमा पूँजीवाद सखाप पार्ने नाममा गरिएको थियो ।
सन् १९८२ मा अपराधमा सामेल भएको कारण मोअनहोप्ट समातिइन् । उनलाई पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइयो । यसबाहेक उनलाई अन्य नौ हत्याको मामिलामा १५ वर्ष जेल सजाय दिइयो ।
मोअनहोप्टले कहिल्यै पनि आफ्नो अपराध स्वीकार गरिनन् । सन् २००७ मा उनी जेलबाट बाहिर आइन् । उनी अहिलेसम्म पनि जीवितै छिन् । एजेन्सीको सहयोगमा
यी हुन् चीनले ७० वर्षमा विश्व समृद्धिमा पुर्याएको ठूला योगदानहरु, पश्चिमाहरुले के सिक्ने चीनबाट ?
चीनसँग अबको २० वर्षभित्र ८०९० बोइंग हुने !
अमेरिकामा झण्डैं ५० हजार मजदुर आन्दोलनमा उत्रिए
अमेरिका र चीनबीच विवाद बढेपछि रूस र भारतले ‘एशिया’ र ‘इण्डो-प्यासिफिक’ बीचको मिलनबिन्दू खोज्दै
चीनले तयार पारेको यस्तो छ पछिल्लो प्रतिरक्षात्मक सैन्य रणनीति, आतंकित बन्दैं पश्चिमा शक्तिहरु
हङकङका प्रदर्शनकारीहरूको देशद्रोहविरुद्ध हङकङका देशभक्तहरुले उठाए एकीकृत चीनको झण्डा